तपाइलाई यी १० लक्षण देखिए सम्झनुहोस् तपाईलाई क्यान्सर लाग्दै छ ! | Sidha News
तपाइलाई यी १० लक्षण देखिए सम्झनुहोस् तपाईलाई क्यान्सर लाग्दै छ !
POSTED ON : September 6, 2017, IN : स्वास्थ्य / यौन
सिधा न्युज डटकम
क्यान्सरले ज्यान लिन्छ । चाहे तपाइँ धनी हुनुहोस् या गरिव । हुने खाने होस वा हुँदा खाने क्यान्सरले छोड्दैन । तर क्यान्सरको शुरुवाती कालमा चाल पाइयो भने आफूलाई बचाउँन सकिन्छ । तर सामान्यतः अधिकाँश मानिसले यस्ता शुरुवाती लक्षणलाई वेवास्ता गर्ने गर्छन् । विज्ञहरुका अनुसार क्यान्सरको शुरुवातीकालमा निम्न लक्षण देखिन्छन् ।
१) निरन्तर खोकी- फोक्सोको क्यान्सर
फोक्सोको क्यान्सर धेरै नै नफैलिए सम्म अधिकाँश मानिसले चाल पाउँदैनन् । कतिपय मानिसमा भने फोक्सोको क्यान्सरका लक्षण शुरुमै देखिन्छन् । फोक्सोको क्यान्सरका मुख्य लक्षण मध्ये निरन्तर खोकी लाग्नु पनि एक हो । खोकी लाग्ने र त्यससँगै छाती दुख्ने हुन थाल्यो भने होसियार हुनुस् । लामो श्वास लिँदा वा हाँस्दा समेत छाति दुख्नु खतरनाक लक्षण हो ।
२) शरीरमा भएका मुसाको रंगमा परिवर्तन- स्किन क्यान्सर
मेलानोमा स्किन क्यान्सर मध्ये सबैभन्दा घातक क्यान्सर मानिन्छ । यो शरीरको कुनै पनि भागमा देखिन सक्छ । तर अधिकाँशलाई खुट्टाको पछाडी, पाखुरा वा अुहाारमा देखिन्छ । कतिपयलाई नङको भित्र समेत देखिन सक्छ
यो क्यान्सरको शुरुवातमा शरीरमा रहेका मुसाको रंग फेरिन्छ । मुसा ठूलो हुने, आकार बदलिने, रंग बदलिँदै जाने यस्ता संकेत हुन् । दुख्ने र चिलाउने समेत हुन सक्छ ।
३) दिसामा रगत, दुखाइ- आन्द्राको क्यान्सर
दिशामा रगत देखिने र दिसा लाग्ने समय परिवर्तन भएको भयै हुनु पनि राम्रो संकेत होइन । यसले पनि तपाइँको सानो आन्द्रामा क्यान्सर भएको संकेत गर्छ । दिशा गर्दा दुख्ने वा रगत देखिनु निक्कै घातक मानिन्छ । यस्तो समस्या अधिकाँशलाई ६० वर्षको उमेरपछि मात्र देखिन्छ ।
४) मुख भित्र सन्चो नहुने घाउ- धेरै प्रकारका क्यान्सर
अमेरिकी क्यान्सर उपचार केन्द्रका अनुसार मुख भित्र घाउ देखिनु र सन्चो नहुने भयो भने क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ । यसलाई मुखको क्यान्सर भनिन्छ ।
मुखको क्यान्सर भएपछि मुख भित्र भएका साना साना घाउ हप्तौं वा महिनौं सम्म सन्चो हुँदैनन् । दुखाइ नभएपनि यस्तो घाउ रहिरहने समस्या क्यान्सरको लक्षण हो ।
५) निल्न समस्या- खाना नलिको क्यान्सर
खाना निल्न समस्या भैरहेको छ भने सचेत हुनुस् । यो तपाइँको खाना नलीमा क्यान्सर भएको संकेत हुन सक्छ । नियमितरुपमा खाना निल्न समस्या हुन थाल्यो भने चिकित्सककोमा गइहाल्नुस् । वजन घट्नु पनि यो क्यान्सरको अर्को लक्षण हो ।
६) रहस्यमयरुपमा वजन घट्नु- धेरै प्रकारका क्यान्सर
अधिकाँश क्यान्सरको साझा लक्षण मानिन्छ वजन घट्नु । यदि तपाइँको शरीरमा रहस्यमयरुपमा वजन घटिरहेको छ भने यो विभिन्न क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ।
अमेरिकी क्यान्सर सोसाइटीका अनुसार वजन घट्नुको कारण खुल्न सकेन भने यो क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ ।
७) पिसावमा रगत- प्रोष्टेट क्यान्सर
पिसाव गर्दा अनपेक्षितरुपमा पोल्ने र थोरै थोरै पिसाव आइरहने जस्ता लक्षण तपाइँलाई प्रोष्टेटमा समस्या भएका संकेत हुन सक्छन् । पिसाव गर्दा रगत देखिनु वा दुखाइ हुनु पनि यस्तो लक्षण हुन सक्छ ।
८) अनावश्यक टुडुल्को उठ्नु
कुनै पनि शरीरको भागमा अनावश्यक टुडुल्को उठ्न थाल्यो वा बढ्दै गयो भने यो पनि तपाइँको शरीरमा क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ । अधिकाँश क्यान्सर यस्तै टुडुल्को बढ्दै गएपछि पत्ता लाग्ने गरेका छन् । स्तन क्यान्सर, अण्डकोष क्यान्सरका लक्षणकोरुपमा यस्ता टुडुल्का देखिन सक्छ ।
९) रहस्यमय दुखाइ- धेरै प्रकारका क्यान्सर
शरीरमा असामान्य अवस्था आउँदा दुखाइ हुनु सामान्य विषय हो । तर शरीरको कुनै पनि भागमा विनाकारण दुखाइ महसुस हुन थाल्यो भने होस् गर्नुस् यो क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ । ब्रेन ट्युमर हुनेलाई टाउको दुख्ने, कोलोन क्यान्सर हुनेलाई ढाड दुख्ने र पाठेघर वा गुदद्वारको क्यान्सर हुनेलाई पनि पछाडीको भागमा दुखाइ हुन सक्छ ।
१०) दिसारपिसावमा रगत- गुदद्वार क्यान्सर
दिशा वा पिसावमा रगत देखिनु खतरनाक हो । खासगरी दिशामा रगत देखियो भने यसले तपाइँको ठूलो आन्द्राको अन्तिम भाग वा गुदद्वारमा क्यान्सर भएको हुन सक्ने संकेत दिन्छ । पिसावमा रगत देखियो भने चाँहि प्रोष्टेट क्यान्सरको लक्षण पनि हुन सक्छ ।
गाईको पिसाबबाट औषधी उत्पादन, १०८ थरिका रोग निको हुने
ढिलो आमा बन्दै हुनुहुन्छ भने ख्याल राख्नुहोस् यी कुरा
Embassy of Nepal(Israel)
Embassy of Nepal(Japan)
Embassy of Nepal(Qatar)
Embassy of Nepal(UAE)
Embassy of Nepal(Malaysia)
Embassy of Nepal(UK)
Embassy of Nepal(USA)
Embassy of Nepal(Korea)
प्रकाश दाहालको निधनमा कसले के भने?
सिधा न्युज डटकम काठमाडौं : पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल..
निर्वाचन कार्यालयमा अज्ञात समूहले राखेको सकेट बम फेला
सिधा न्युज डटकम मलेखु : जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धादिङ परिसरमा अज्ञात समूहले राखेको..
भावविव्हल बने पुष्पकमल,पुत्र प्रकाशको शव हेरर आँशु थाम्न नसकेपछि, अध्यक्ष्य दाहाल नर्भिकका सिइओको कक्षमा
सिधा न्युज डटकम काठमाण्डौ : पुत्रको शव देख्दा कुन पिताको गह नभरिएला र..
प्रकाशको पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धान्जलीका लागि पेरिसडाँडामा राखिने, ४ बजेपछि पशुपतिमा अन्त्यष्टि गरिने
सिधा न्युज डटकम मंसिर, काठमाडौं : दिवंगत प्रकाश दाहालको पार्थिव शरीर अन्तिम श्रद्धान्जलीका..
मिठो स्वोर कि धनि चर्चित गायिका मेनुका राई र लाक्पा शेर्पाको सुमधुर स्वोरमा नयाँ म्युजिक भिडियो टेम्केमा हिउँ झर्यो सार्वजनिक
सिधा न्युज डटकम मिठो स्वोर कि धनि चर्चित गायिका मेनुका राई र..
2014 | All rights reserved by Sidha News